ZEC Yorambidza ZimRights Kuongorora Refendamu
ZEC inoti ZimRights ine nyaya iri kudare ine chekuita nesarudzo
WASHINGTON DC — Vakafanobata chigaro chasachigaro weboka rinoona nezvesarudzo munyika, reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, Amai Joyce Kazembe vanonzi vazivisa kuti sangano ravo richarambidza rimwe sangano rakazvimirira kuongorora sarudzo dzereferendamu nemusi weMugovera, sezvo rine nyaya iri kumatare.
ZEC inonzi neChipiri yakanyorawo tsamba kumasangano akazvimirira ichizivisa kuti yakanga yave kubvumidza mamwe ose kuongorora sarudzo idzi kunze kwesangano reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, iro riri kupomerwa mhosva dzine chekuita nekusarudzo.
Mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition VaMcdonald Lewanika vati semasangano akazvimirira vakatyamadzwa zvikuru nedanho reZEC iri, sezvo ZimRights isati yatongwa kumatare ichiwanikwa iine mhosva yairi kupomerwa.
NeChipiri Crisis in Zimbabwe Ccoalition yakanyorera vatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa tsamba ichiratidza kunyunyuta kwayo nedanho reZEC rekurambidza mamwe masangano kuongorora referendamu iyi.
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai vakazivisawo neChipiri chakare kuti hapana masangano emunyika acharambidzwa kuongorora sarudzo idzi.
VaLewanika vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi nevamwe vavo nemusi weChina kuti vaone danho rekutora rakaita sekubuda muhuruongwa hwereferendamu uhwu senzira yekuratidza ZEC kunyunyuta kwavo.
Zvichakadaro, magweta ari kumirira ZimRights eZimbabwe Lawyers for Human Rights anonzi ari kutarisirwa kukwidza nyaya yekurambidzwa kweZimRights kuongorora sarudzo dzereferendamu kumatare edzimhosva nemusi weChina.